Gịnị bụ ọgwụgwọ CIAT maka aphasia - Ọzụzụ Cognitive
Here nọ ebe a: Home » Maka ndị ọkachamara » Artikoli » aphasia » Gịnị bụ ọgwụgwọ CIAT maka aphasia
CIAT (Constraint-Induced Aphasia Therapy) bụ usoro ọgwụgwọ ọgwụgwọ achọrọ ndị mmadụ aphasia nke dabere na iwu ndia:
zere iji usoro ịkwụ ụgwọ
mee ọgwụgwọ kpụ ọkụ n'ọnụ
Pulvermuller na Berthier, 2008
Dabere nahypothesis nke na-ejighi Pulvermuller, n'ezie, iji usoro akwụghachi ụgwọ ga-eme ka ndị nwere nsogbu na-achọkarị iji okwu na-erughị ala ma belata nkwupụta okwu, wee si otú a belata oke na ohere mgbake.
Ihe atụ nke ntọala ọgwụgwọ enwere ike ịchọta ya Okpokoro usoro amụrụ asụsụ iji mee ka ọ dịghachi mma n'oge mbụ (Kirmess & Mahler, 2010) ebe eji kaadị ndị nwere ihe ụfọdụ eme ihe n'ime egwuregwu "Go azu" (lee anya n'okpuru) yana usoro 4 nke ihe mgbagwoju anya.
Nkọwa nke egwuregwu "Go Fish!".
Kaadị ọ bụla ejiri kaadị 4 rụọ ọrụ (na nke a na ihe osise) ma debe ndị nke ọzọ ihu na ala. Onye ọ bụla sonyere na-ajụ onye ọzọ:
"You nwere kaadị nwere ...?"
Ọ bụrụ na onye ahụ nwere kaadị ahụ, ọ ga-enye ya onye asọmpi nke rịọrọ ya. Ma ọ bụghị, ọ zara "Gaa azụ!". Onye ọkpụkpọ ahụ rịọrọ arịrịọ na-ezighi ezi na-adọta kaadị site n'aka ndị nọ n'elu ala ma gafere ntụgharị gaa na nke na-esote. Mgbe onye ọkpụkpọ dechara otu (dịka ọmụmaatụ, mgbe iji kaadị poker na-egwuri egwu, ọnụọgụ anọ ya na K) ọ nwere ike idobere nkeji nkeji, dechara akara. Onye ọkpụkpọ ji ọtụtụ ihe merie.
Go Go nwere ike egwuri n’ịntanetị! ebe a
A na-eji ha mee ihe n'ọmụmụ Kirmess & Mahler ọkwa dị iche iche. Na ọkwa mbụ, dịka ọmụmaatụ, ọkpụkpọ na-akpọ naanị kaadi o nwere (dịka: "achịcha?"). N ’ọkwa nke abụọ a gwara gị ka ị kpọọ aha onye mmegide gị wee kwupụta ahịrịokwu (" Jane, ị nwere achịcha? "). N'ime ọkwa ndị a, a na-ewepụta ọdịiche dị iche iche maka kaadi ọ bụla (ikike na ịba ụba) iji mee arịrịọ ndị akọwapụtara karịa ("Jane, ị nwere achịcha toasted?").
una nyocha usoro site na Zhang et al. (2017) na-egosi etu ụdị usoro a ga-esi bara uru maka ndị ọrịa nwere ọrịa aphasia, mana “ịdị elu ya” ma e jiri ya tụnyere usoro ndị ọzọ (dị ka SAT kpochapụwo, Mkpali Aphasia Therapy) ka ga-egosipụta.
Akụkụ kachasị mkpa nwere ike ịbụ ike ọgwụgwọ (ọ na-abụkarị ụbọchị ise n'izu) karịa iji asụsụ na-eme ihe pụrụ iche. Ọzọkwa, ụdị ọgwụ CIAT metụtara na ntanetị metụtara mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike iweta uru dị ukwuu.
CIAT vs M-MAT: nke usoro ọgwụgwọ ka mma?
aphasia, ciat, ọgwụ aphasia, asusu igbo
Gịnị bụ ọgwụgwọ CIAT maka aphasia2019-05-042020-09-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/05/aa-1065817_960_720.jpg200px200px
Ọrụ ndị isi na-emetụta nhazigharị nke aphasiaAphasia, edemede, Ọrụ Ndị Isi, Ọrụ Nchịkwa, Neuropsychology, Ọgwụ
Ọrịa isi na ọnya isi: mgbakwunye ọgbụgba ndụ na - egosiAphasia, Edemede, Ọrụ Nchịkwa, Stroke, Neuropsychology